Xadhiga xaqdarada ah iyo xabada xukumaddu nagu laysay waxaan ku ilaabaynaa xurmada qaranka u hayno | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on June 20, 2015 by sdwo · No Comments
Goor sheegto waa 9:15pm waxaan ka soo baxay masjidka sheikh dirir salaadii taraawixda habeen hore, waxaan ku si jeedaa gaadhigeyga oo ag yaal baanka dhaxe, waxaa mobile kayga ku soo dhacday fariin iga timid Liban Ismacil oo kamid ah saraakisha xuququl adama qaranka waxuuna igu wargaliyey in xaafadii daami dhaawac badan yaalo oo xaaladu adag tahay.
Waxaan la xidhiidhay gudoomiyaha xaafada wuxuuna ii sheegay iney xaafaddu aad u kacsan tahay dhaawacna yihiin 3 qof oo xabadi ku dhacday!
Waxaan waydiiyey xalkee ayey dadka xabadu ku dhacday la geeyey? Wuxu igu jawaabay saldhiga new hargeisa.
Waxaan ku idhi xalkee ayey ku sugan yihiin iyagu hadda? Wuxu igu jawaabay daami. Daami ayaan tagay waxaanan kula kulmay taliyihii qeybta beriga iyo saraakil la joogtey waxaanan u sheegay iney mihim tahay dadkan dhiig baxay in la geeyo hospital oo aniga la igu siiyo damaanad soona celiyo. Wuxu igu yidhi haye tag saldhiga ila so hadashi horjoogaha ciidanka saldhiga waxaan ku soo laabtey saldhigii new hargeisa. markii aan ka soo galay albaabka oo aan dhaawicii is idhi qaad oo hospitalka gee ayaa waxaa ku soo dhacay joornaatigi saldhiga joogay telfoon waxoogaa markii uu la hadlay ayuu siidhi afuufay askar badan ayaa soo yaacday wuxu amar ku siiyey in la isku kay jabiyo oo la I xidho!
Waxay aheyd dhawaan marki suuqa bartankisa la igu soo weeraray ee la iga burburiyey gaadhigeygii cid wax iga qabatey maysan jirin akhirkina cida dhibta ii geystay xukumadda ayey noqotey, haddana anigoo iska baraad la ayaa xadhig qaxdaro ah la igula kacay, waxaa rasaas nool lala dhacay bulshada gabooye oo hadda sadex qof dhawac yihiin cid dawlada ah oo booqatey iyo cid ka hadashay midna ma jiraan. Dawladan waxaan leeyahay haddii ay bulshada gabooye idin nacday oo idinka tashatay xabad iyo xadhig xalkoodu maahee ee xishooda oo sharafta qaranka ayaad huwan tihiine wax isku fala waanu adoowna inaanu dunida gaadhsiino waxaad sameyneysaan balse sharafta qaranka ayaanu dhowraynaa waa ramadaan ma jecli tirsi iyo aflagaado balse haddii aad joojin waydaan waxaad wadaan waxaa igu wallaahay ah inaan ceebtiina maqaal maqaal ugu soo qoraa saxaafada waan xishooday oo waad iga hadhi laadihiiine.